Xeesha cusub ee maandooriyaha Qaadka loo soo geliyo dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lars Hansson, khabiirka muqaadaraadka ee wakaaladda xudduudaha Iswiidhen. Sawirle: Anna Hanspers Sveriges Radio
Xeesha cusub ee maandooriyaha Qaadka loo soo geliyo dalka
10 kg oo qaadka qalalan wuxuu u dhigmaa 600 kg oo daray ah.
La daabacay fredag 24 oktober 2014 kl 13.53
Lars Hansson, khabiirka noocyada kala duwan ee maan-dooriyeyaasha, waxa loo yaqaanno daroogada ee ciidanka ilaalada xuduuddaha Iswiidhen ayaa sheegay in is-bedel uu ku dhacey habkii iyo ciddii isticmaali jirtey maan-dooriyaha Qaadka ee dalkan lagu soo geliyo sida sharci-darrada ah.
- Xaqiiqdii ma garwaaqsanin weli saameeynta uu muqaadaraadka qaadka shiidani leeyahay marka loo barbar-dhigo qaadka caleemaha ee la ruugo, dhanka kale waxaa jira war-bixnno kala duwan ee sheegaya tusaale ahaan, aniga oo weliba carrabka ku adkeeynaya in tobanka kiilo ee qaadka shiidan uu u dhigmo 600 oo kiilo oo qaadka caleenta ah. Waa tayo ka badan nus tan
Wixii ka dambeeyey mamnuuciddii muqaadaraadka qaadka ee laga mamnuucay waddammada Holan iyo ingiriiska ayuu dalkan aad uga yaraadey maan-dooriyihii qaadka ee caleen ahaanta ku soo geli jiray, halka uu iminka waxa la qabtaa yahay badankii nooca qaadka shiidan ee sida xaaraanta sharci-darrada ah la isugu dayo in dalka lagu soo geliyo, sida uu sheegay Lars Hansson:
- Haba yaraatee ma jiro qaad caleen ah oo aannu qabaney. Waxaannu qabannaa oo keliya qaad shiidan iyo mid la qalajiyey. Halka intii aan laga mamnuucin maan-dooriyaha qaadka waddammadii ugu dambeeyey ee xubnaha ka ah ururka Midowga Yurub (EU) uu muqaadaraadka qaadka ee la qaban jirey badankii ahaa midka caleenta ee la ruugo ee darayga ah ama caleen cusub, sida uu sheegay Lars Hansson, ahna khabiirka muqaadaraadka ee hayadda xuduudaha Iswiidhen.
Baahida dadyoowga qaadka isticmaala ee dalkan ayaa aad u ballaran, isla-markaana ey ragga soomaalidu ka mid yihiin bulshooyinka sida aadka ah u isticmaala qaadka, waana midda dhalisay inuu is-bedel ku dhaco dhabbadii sida dhuumaaleeysiga ah loogu soo waaridi jirey maan-dooriyaha qaadka ee waddammada dhaca waqooyiga Yurub oo dalkan Iswiidhen uu ka midka yahay. Lars Hansson iyo mar kale:
- Intii aan qaadka laga mamnuucin waddammada Holan iyo Ingiriiska wuxuu qaadka kontrabaanka lagu keeni jiray ahaa caleen daray ah - cusub. Hase yeeshee wixii mamnuuciddaa ka dambeeysay ayey dadyoowga qaadka soo waarida gar-waaqsadeen in aanay suurtagal ahayn middaa, isla-markaana wax ka bedeleen istaraatiijiyadoodii hore.
- Xaaladda maanta siday tahay waxaa un la soo waaridaa qaadka qalalan - shiidan, waana mid leh tayo ka duwan midkii darayga ahaa.
Is-bedel miyaa ku dhacay halka laga soo geliyo Qaadka?
- Waxaa la oran karaa, in qaadka qalalan ee la qabto ee ugu badan wuxuu weli yimaadaa carriga Skåne. Waayadii hore qaad sidaa u fara badan ma aannu iman jirin garoonka dayuurradaha ee Istockholm - Arlanda, haddase waxaa iska soo daba dhaca baakado uu ku jiro qaad qalalan, sida uu sheegay Lars Hansson, ahna khabiirka muqaadaraadka ee hayadda xuduudaha Iswiidhen.
Is-bedelka ku dhacay habkii isticmaalka ee maan-dooriyaha qaadka. Caleen daray ah oo la ruugo iminka isku badashay in qaabab kale loo isticmaalo tusaale ahaan in shaah ahaan loo cabo, wararka qaarkood oo sheegaya in sigaar ahaan loo isticmaalo iyo wixii la mid ahaa ayaa haddana hor-seedi kara inuu hor-seedo is-bedello uey ka mid yihiin dadka isticmaala cidda ey yihiin, habka loo isticmaalo iyo sidoo kale saameeyn uu ku yeesho dembiyadii ciqaabta ee dalka u deg-sanaa:
- Illaa hadda ma garwaaqsanin saameeynta qaadka shiidan uu yeelan karo iyo sida uu ugu dhigmo midka qoyan ama caleenta darayga ah. Waa waxyaabaha aan u baahannahey inaannu eegno oo ka baaraan-degno. Waa arrimmo aan dib isaga iman doono, sida uu sheegay Lars Hansson, ahna khabiirka muqaadaraadka ee hayadda xuduudaha Iswiidhen.
Isha /P4 Malmö Hus
P4 Malmö Hus